Sibona izinja zijikeleze kwaye ezinye zazo zibonakala ngathi zinamandla angenamda, ngelixa ezinye zibuyiselwe umva. Uninzi lwezilwanyana ezifuywayo ziyakhawuleza ukubiza inja yazo enamandla okuba "zibaxeke kakhulu," Kutheni ezinye izinja zinexhala kakhulu kunezinye? Iimpawu zokuzalela abelusi baseJamani, iiBorder Collies, ukubuyisa igolide, Si ...
Kukho amadlala okubila kwimilenze yenja yakho. Izinja zivelisa ukubila kumalungu emizimba yazo engagutyungelwanga ngoboya, njengempumlo kunye neepads zeenyawo zazo. Umaleko wangaphakathi wesikhumba kwipuphu yenja unezidlala zokubila-ukupholisa inja eshushu phantsi. Kwaye njengabantu, xa inja inovalo okanye ixinezelekile, ...
Wonke umnini-silwanyana ufuna ukwazi okungakumbi ngezinja zabo, malunga nenja abayithandayo yokulala. Izikhundla zezinja zilala kuzo, kwaye ixesha abalichitha belala linokubonisa okuninzi malunga nendlela abavakalelwa ngayo. Nazi ezinye iindawo zokulala eziqhelekileyo kunye nokuba banokuthetha ntoni. Ngecala ...
Ngaba inja ifuna ingubo ebusika
Ubusika buyeza kungekudala, xa sinxiba iipaki kunye neempahla zangaphandle zonyaka, siyazibuza- ngaba inja ifuna iingubo ebusika, nayo? Njengomgaqo oqhelekileyo, izinja ezinkulu ezineengubo ezishinyeneyo nezishinyeneyo zikhuselwe kakuhle kwingqele. Iintlobo ezinje ngeAlaskan Malamute, iNewfoundlands, kunye neeSuserian Huskies, ezine ...
Kutheni izinja zitya ingca
Kutheni izinja zitya ingca？ Xa uhamba nenja yakho, ngamanye amaxesha uyakufumana inja yakho itya ingca. Nangona uyondla inja yakho ukutya okunesondlo kugcwele yonke into abayifunayo ukuze bakhule kwaye b ...
Uyicutha njani iinzipho zekati yakho
Ungayicutha njani iinzipho zekati yakho treatment Unyango lwenzipho yinxalenye yokhathalelo lwekati yakho. Ikati ifuna iinzipho zayo zichetyiwe ukuze zingagqabhuki okanye zaphuke. Kuyanceda ukunciphisa iindawo ezibukhali zekati yakho ...